mubvunzo C-123 Provider
11 mwedzi 2 masvondo apfuura #1018 by Sruble
Ndakatora C-123 mwedzi miviri yakapfuura. Ndine dambudziko nemapurisa. Panzvimbo yekuti uone kuburikidza nehurukuro kuti iwe unowanzoona pane imwe ndege iri kutiza, ndine dhiketi yakasimba mundiza iyo inongoparara mumakore. Mhinduro ipi zvayo? Ndatenda
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: papy68
Time chokusika peji: 0.518 mumasekonzi